mairie-antananarivo – Anosipatrana – Pompiers
Anosipatrana – Pompiers
administrateur 11 jona 2018 Commentaires fermés
Ankoatra ny fampihofanana sy fampianarana noentin’ireo Pompier avy amin’ny College Montmorency Canada tetsy amin’ny Sampana mpamonjy voina Tsaralalana dia niavaka ny andron’ny Zoma 08 Mey 2018 satria nanaovana ny fampiharana. Teny Anosipatrana no nanatanterahana izany.
Tsy nampoizina ny zava-nitranga satria nisy ny lozam-piarakodia teny amin’izany faritr’Anosipatrana izany satria fiara 4×4 Mitsubisu iray no niala ny arabe ka nitsoraka tany antanimbary. Avy hatrany dia ireo mpamonjy voina avy any Canada sy ny tetsy Tsaralalana no nanao ny famonjena.
Tsy nisy aloha ny aina nafoy fa ny naratra kosa no nanaovana ny vonjy voina avy hatrany ka tao anatin’izany ny olona iray tao anaty fiara sy ny olona iray hafa tety amin’ny arabe. Raha nampitahaina tamin’ny fampihofanana noentin’ireto Kanadianina ireto nandritra ny andiany voalohany dia nafonja ity andiany faha 2 ity satria ankoatra ny fampianarana dia teo ny fampitaovana noentin’ireto vahiny ireto. Tsiahivina fa efa nisy ny fanavaozana ny fifanarahampiarahamiasa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny mpamonjy voina mpihofana avy amin’ny College Montmorency Canada.